Mareykanka oo soo saaray doon ku shaqeynaysa falaadhaha cadceeda | Gaaroodi News
Mareykanka oo soo saaray doon ku shaqeynaysa falaadhaha cadceeda
Iyada oo hore loo sameeyey diyaarad ku shaqaysa falaadhaha cad ceeda oo muddo ku wareegaysay adduunka ayaa haddana lagu guulaystay in la sameeyo Doon ku shaqaynaysa falaadhaha cad ceeda oo aan u baahnayn wax shidaal ah.
Doontan ayaa dhowaan lasoo saaray,iyada oo la sheegay inay geli doonto dhowaan socdaal lamid ah kii ay gashay diyaaradaasi ku shaqaynaysay Falaadhaha cad ceeda.
Doontay ayay sameeyeen khubaro kala duwani,iyada oo ay ka qayb qaateen samaynteeda ilaa 30 Injineer iyo laba farshaxan,kuwaas oo muddo dheer ku hawlanaa sidii ay usoo saari lahaayeen Doontaasi.
Khubaradan ayaa ugu dambayn soo saaray doono dhererkeedu yahay ilaa 30 meter, taas oo qaadi karta ilaa 25 tan oo culays ah.
Doontan oo loo bixiyey Solar Impulse of the Sea ayaa ah mid u samaysan habka markabka oo kale,sidoo kalena leh Beytariyo kaydsanaaya falaadhaha cad ceeda,waxa kale oo ku rakiban qalab dabaysha awoodeeda ka dhimaaya, waxa kale oo lagu rakibay qalab Hydrogen-ta biyaha ku jirta u sifaynaaya.
Lakabka hoose ee doontaasi ayaa ah mid si weyn uga samaysan waxyaalo nuuga Oxygen-ta iyo Hydrogen-ta.
Qalabka ku xidhan ayaa ah 130 square oo qabsanaaya falaadhaha cad ceeda, kuwaas oo u sahli kara inay muddo dheer ku socoto kaydkaasi falaadhaha cad ceeda,sidoo kalena mashiinadeeda ayaa ah kuwo si fudud ula qabsan kara xaalad walba oo ay ku jirto iyo cimilo walba oo ay marayso, iyada oo kuwo mashiinadaasi kamid ahi yihiin kuwo shaqayn kara habeenkii.
Raga doontan sameeyey oo u waramaayey wargeyska Daily Mail oo uu qormadan kazoo xigtay wargeyska Dawan ayaa sheegay in ay hore ugu guulaysteen inay sameeyaan maraakiib kala duwan oo maanta caalamka ka shaqaysa,laakiin tani tahay tii ugu horeysay ee ay habkan u sameeyaan.
Kooxdan ayaa samaysay doon lagu magacaabo Victorian Orosard , taas oo muddo 6 sanno ah caalamka hore ugu wareegaysay.